म पनि त्यही आशा गर्छू सबै कमसल र नराम्रा कुराहरू अतित बनून र नया वर्ष मुलुक र मुलुकवासीका लागि सुखदायी बनोस् ।
केही दिन यता दौंतरीमा पाठकहरु पनि बिदा मनाउन जानु भए जस्तो छ। मैले पनि यो लेख पढ्छु भन्दा भन्दा अरुनै कुरामा अलमल परेर त्यस्तै भयो।
नेपाली राजनिती संसकार फेरिएको कुरालाइ म पनि समर्थन गर्दछु। घ्रिणाको राजनिती त जांहा पनि हुन्छ,त्यसमा नेपाल मात्र अक्षुतो छैन। त्यसमा पनि नेपालमा देश बिग्रेको अर्कोले गर्दा हो भन्ने अनि आफुं चाही केही नगर्ने, गरे पनि उही आफ्नो दुनो सोजाउने काम मात्रै, देश कता छ ,जनता कांहा छन , के गर्दै उत्तम हुन्छ हैन,उही राजनितिक परिबर्तन गर्ने, कसरी आफ्ना कार्यकर्ताको पेट भरिन्छ आदी। अनि बिपक्षका भने कसरी हुन्छ त्यो सत्तामा बस्नेको कुर्सी फुत्काउने, बस त्यही धुनमा जाम,बन्द,तोडफोड आदीमै सारा समय बिताउंछन।
मुख्य कुरो त यांहा नियम कानुनको कसैलाइ वस्ता नै छैन। सबभन्दा कमी त्यसमा छ, दोस्रो देशको लागी भिजन छैन। भिजन भए पनि उही लिडेंपन छ,किन त्यो लाभदायिक छ या किन छैन भन्ने कसैलाइ मतलब नै छैन। तेस्रो आफ्ना नेताले ज भन्छन सबैले हो मा हो मिलाउंछन, कोही कार्यकर्तामा पनि नेताको यो ठिक या बेठिक भन्ने दम छैन, यस्ले अन्धो नेता बाहेक अरु केही जन्माउदैन।
तर पनि नया बर्ष संगै आशाका किरणहरु भने फैलाउन छोड्नुहुन्न।
हो त नि , के भा हो साथीहरूको उत्साह पनि पुषको जाडोमा कठ्याङ्ग्रिए जस्तो छ !
Malai pani testai lagyo. Jhan yo minnesota ma ta yo haptai bhari purai minus ferhenit chha.
यस पालाको जाडो , हिमपात र अतिवादी वातावारणीय प्रभावको कुरा अरू वर्षहरूमा भन्दा निकै बढेको बताइरहेका छन् संसार भरका मिडियाहरू । नेपालियनजी , क्यानडा बोर्डरको मिनेसोटामा जाडोको प्रभाव पक्कै मैले अनुमान गर्ने भन्दा बढी नै हुनुपर्छ । तर मेरोमा त बाह्रै महिना टी-सर्टले चल्छ , ढुक्क छु - जाडोको चिसोमा विविध न्याना अनुभव खोज्दै रमाउन खोज्ने साथीहरूको अलिकति ईर्ष्या गर्दै ।
अनि ठरकीसर पनि आजकल निजी व्यस्ततामा फँस्नु भा हो कि !